विश्वकप फाइनलमा यसरी पुगे फ्रान्स र क्रोएशिया | | Neplays.com
नेप्लेज, ३० असार । विश्वकप सुरु हुनुअघि तपाईले फ्रान्स र क्रोएशिया फाइनलमा पुग्ने अनुमान गर्नुभएको थियो ? यदि गर्नुभएको थियो भने अचम्मै हो । मतलव, ‘शानदार’ टोलीलाई छाडेर यी दुई फाइनलमा पुग्छ भनेर कसले सोचेको थियो र !
निश्चित रुपमा फ्रान्स प्रतियोगिताको दावेदार टोलीमध्येको एक हो र अपेक्षाकृत रुपमै फाइनलमा पनि पुग्यो । तर, क्रोएशिया जसको विश्वकप जित्ने सम्भावना ३३ मा १ थियो । ऊ विश्वकपमा सहभागी ३२ टोलीमध्ये ११औं स्थानमा थियो । यद्यपी रियल मड्रिडलाई लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन्स लिग जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मिडफिल्डर लुका मोड्रिच र बार्सिलोनालाई ला लिगा च्याम्पियन बनाउन भूमिका खेलेका इभान राकिटिचले क्रोएशियाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।
र पनि क्रोएशिया विश्वकपको दावेदार थिएन । तर, चमत्कारै भयो । किनभने क्रोएशिया शानदार र अनिश्चित थियो र फ्रान्स आफैंमा स्टारहरुले भरिएको थियो । फ्रान्स भर्सेस क्रोएशियाबीचको फाइनलसम्म आइपुग्दा धेरै टोलीहरुबीच धेरै कुराहरु भए । फ्रान्स एकभन्दा बढी पटक विश्वकप जित्ने छैटौं मुलुक बन्ने अभियानमा रहँदा क्रोएशिया विश्वकप जित्ने नवौं मुलुक बन्न चाहन्छ ।
यहाँ केहि उत्कृष्ट कारणहरु प्रस्तुत गरिएको छ, जसले फ्रान्स र क्रोएशियालाई विश्वकपको फाइनलमा पुर्यायो
१. बेल्जियम १–० इंग्ल्याण्ड
समूह चरणमा जव समूह जीको अन्तिम खेल आयो । बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड दुवै अन्तिम १६ मा पुगिसकेका थिए । बराबरी खेलेको अवस्थामा उनीहरुको अंक लगायत सबै समान हुने थियो र नतिजा फेयर प्लेका आधारमा गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो भएको भए समूह विजेता इंग्ल्याण्ड हुने थियो ।
तर, दोस्रो हाफमा अदनान जानुजाजले गोल गरी बेल्जियमको सबै योजना खराव बनाइदिए । गोल खाएपछि इंग्ल्याण्ड पनि दवावमा देखिएन । बेल्जियम समूह विजेता भयो र विश्वकप यात्रामा उसको बाटो निकै कठिन बन्यो ।
फाइनल पुग्न बेज्लियमले जापान, ब्राजिल र फ्रान्सलाई हराउनुपर्ने भयो । दुई खेलमा त उसले जित निकाल्यो तर, सेमिफाइनलमै बेल्जियमसँग पराजित हुन पुग्यो । इंग्ल्याण्डको हालत पनि यस्तै भयो । कोलम्बिया र स्वीडेनलाई हराएको उसले पनि सेमिफाइनलमा क्रोएशियासँग पराजय ब्यहोर्यो । यस्तो होला भनेर कसले सोचेको थियो र ?
२. जर्मनीको अप्रत्यासित बहिर्गमन
जर्मन प्रशिक्षक जोचिम लोले केहि शिक्षा लिनु जरुरी थियो कि पछिल्लो समरमा कन्फेडेरेसन कपमा एक उर्जावान र युवा टोलीलाई मैदानमा उतारेका थिए र त्यही समूहले प्रतियोगिता जितेको थियो ।
त्यसको विपरित उनले मिडफिल्डमा मेसुट ओजिल, सामी खेडिरा, अग्रपंक्तिमा मारियो गोमेज र गोलरक्षक म्यानुअल निउरमाथि भरोसा गरे । खेडिराले केहि गरे, ओजिल पूर्ण रुपमा असफल देखिए र गोमेज बेञ्चमा बसेर गोल खाएको हेरिरहे । निउर चोटका कारण पूर्ण रुपमा फिट थिएनन् । त्यसमाथि २०१४ मा जस्तो शानदार रक्षापंक्ति पनि जर्मनीसँग थिएन ।
जर्मनीको टोलीकै एकमात्र स्तरीय खेलाडी राइट ब्याक जोसुवा किमिच देखिए ।
३. ध्वस्त अर्जेन्टिना
यो भन्नु निकै कठिन छ कि अर्जेन्टिनी टोली लियोनल मेस्सीको अन्तर्राष्ट्रिय करिअरमा कोशेढुंगा बनाउन असफल रह्यो । तर, के भन्न सकिन्छ भने फ्रान्सबिरुद्धको निर्णायक खेलमा अर्जेन्टिनी कोचिङ स्टाफ गोञ्जालो हिगुइन र सर्जियो एग्यूरोलाई उचित प्रयोग गर्न जानेनन् ।
एग्यूरोले गत सिजन म्यान्चेस्टर सिटीका लागि २५ लिग खेलमा २१ गोल गरेका थिए भने हिगुइनले युभेन्टसबाट ३५ खेलमा १६ गोल गरेका थिए ।
फ्रान्सबिरुद्धको खेलमा यी दुई उच्च लयमा रहेका खेलाडी बेञ्चमा राखेर रक्षापंक्ति बलियो बनाउने प्रयास गरियो । तर, यो निर्णय प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओलीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । जसको फलस्वरुप अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनाले ४ गोल खायो । जुन अन्य नतिजाको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।
चार खेलमा अर्जेन्टिनाले जम्मा ९ गोल खायो । अन्य कुनै टिमले ७ गोलभन्दा बढी खाएका छैनन् ।
४. इडिन्सन कभानीको चोट
युरोपेली च्याम्पियन पोर्चुगललाई अन्तिम १६ मा पराजित गर्ने क्रममा २ गोल गरेका इडिन्सन कभानी त्यही खेलमा चोटग्रस्त भए । त्यस खेलमा भएका दुवै गोलमा उनले लुइस स्वारेजसँगको तालमेल गज्जवको देखिएको थियो । क्वार्टरफाइनल फ्रान्सबिरुद्ध उनी मैदानमा उत्रन सकेनन् । नतिजा के भयो सबैले देखे ।
निश्चित रुपमा उरुग्वेको मध्यपंक्तिमा रचनात्मकताको कमी देखियो । जुन टिममा शशक्त रक्षापंक्ति र शानदार अग्रपंक्ति थियो । कभानीको अनुपस्थितिमा स्वारेज पनि कमजोर देखिए ।
५. कासिमेरोको पहेलो कार्ड
अन्तिम १६ को खेलमा ब्राजिल १–० ले अगाडि रहेका बेला दोस्रो हाफको १५ मिनेटपछि मेक्सिको निकै खतरनाक देखिएको थियो । त्यसैबेला ब्राजिलका स्टार डिफेन्सिभ मिडफिल्डर कासिमेरोले काउन्टर एट्याक रोक्ने क्रममा मेक्सिकोका हिरविङ लोजानोलाई फल गरे ।
कासिमेरोले पहेलो कार्ड पाए । जुन उनको प्रतियोगितामा दोस्रो पहेलो कार्ड थियो । यसको मतलव उनले क्वार्टरफाइनल खेल गुमाउने भए । यो घटनाक्रम ब्राजिलका लागि निकै हानिकारक थियो । उनको अनुपस्थितिले मध्यक्षेत्रमा इडेन हाजार्ड र केभिन डी ब्रुयेनले पर्याप्त स्पेस पाए । जसका कारण अग्रपंक्तिमा रोमेलु लुकाकुलाई खुलेर खेल्ने मौका मिल्यो ।
६. राकिटिक र लेफ्टपोष्ट
विश्वकपमा मोड्रिचको महानताले मात्रै क्रोएशिया अन्तिम १६ र क्वार्टरफाइनल खेलमा पेनाल्टी शुटआउटमा जित हासिल गर्न सफल भएको होइन । र, प्रत्येक पटक इभान राकिटिच थिए, पेनाल्टीमा जसको गोल निर्णायक थियो । उनले त्यो पूरा गरे । दुवै पटक उनले एकै दिशामा पेनाल्टी हाने र सफल भए ।
सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनका लागि अन्तिम पेनाल्टीमा रुसी गोलरक्षक इगोर अकिनफिवले सोचेका थिएनन् कि उनले त्यही दिशामा बल प्रहार गर्छन् जुन अन्तिम १६ मा डेनमार्कबिरुद्ध गरेका थिए । त्यसैले उनले दायाँतर्फ डाइभ गरे । तर, राकिटिचले डेनमार्कबिरुद्ध गरेको शैलीमा गोल गरे र टिमलाई सेमिफाइनलमा पुर्याए ।
७. अदृश्य पाउल पोग्वा
पछिल्लो केहि वर्षयता फ्रान्सेली फुटबलको आइकनको रुपमा देखिएका पोग्वा, फ्रान्स पछिल्लो २० वर्षमा तेस्रो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुग्दा अदृश्य रुपमा महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् । उनी आक्रामर र रक्षात्मक दुवैमा फ्रान्सको मिडफिल्डमा जमेर बसेका छन् ।
पोग्वा एक एट्याकर वा डिफेण्डरको रुपमा मात्र होइन पछाडिबाट विपक्षीलाई डिस्टर्व गर्ने, बल चोर्नेजस्ता उनका खुवी विश्वकपमा हेर्नलायक देखिए ।उरुग्वेबिरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा उनले एन्टोइन ग्रिजम्यानलाई गोलका लागि परोक्षरुपमा बल उपलब्ध गराएका थिए ।
उनले अहिलेसम्म गोल गर्न सकेका छैनन् । असिष्ट पनि गरेका छैनन् । तर, उनी फ्रान्सेली टोलीको प्रमुख हिस्सा छन् ।